Andithandani nge-10cc - Izinto Zobugcisa
Le ngoma yayiquka ukuxhaswa kwekwayala enkulu engenamagama, enyanisweni yayingamazwi eqela. Yayakhiwe ngobukrakra ukusuka kwi-chord loops kunye neendlela ezininzi: kwafuneka ukuba kugqitywe amagama angama-256 ukuze kugqitywe ulungelelwaniso olulungileyo emva kwezwi likaEric Stewart.
Umbono wale ngoma uvela ku-Eric Stewart esithi kumfazi wakhe ukuba uhlala esithi 'Ndiyakuthanda' kaninzi, ayizukuthetha nto nangona emthanda. Ukhumbule ukuba UMgcini :
Ndadibana nale ntombazana intle ibizwa ngokuba nguGloria kwiholo yedolophu yaseHalifax. Ndandineminyaka eli-18. Wayeneminyaka eli-16 ubudala, satshata. Kwiminyaka embalwa emva koko, uGloria wathi kum: 'Awusatsho ukuthi' ndiyakuthanda 'kakhulu. Ndamxelela ukuba, ukuba bendithetha ngalo lonke ixesha, izakuvakala ngathi ayikonwabisi. Kodwa ndiye ndaqala ukuzibuza ukuba ndingathini ngaphandle kokusebenzisa la magama. Ke 'andithandani' yaba yingxoxo yokuthetha nam-kwaye yingoma.
Ndabhala amazwi kwiintsuku ezimbalwa. Umgca, 'Ndigcina umfanekiso wakho phezulu eludongeni, ufihla ibala elibi' wawumalunga nokuqhekeka kodonga lwam lokulala endlwini yabazali bam eManchester. Ndabeka ifoto kaGloria ngaphezulu kwayo. Xa ndathatha ingoma ndaya nayo kwiqela, bathi: 'Andithandani'? Yintoni f - k yileyo? Awunakutsho! ' Kodwa uGraham Gouldman, umdlali wethu we-bass kunye ne-chord-master, uvumile ukusebenza nam. Sobabini siyithandile Intombazana evela kwiIpanema, ke siyinike isimbo esifana nesebossa nova. Emva koko uKevin Godley, umgqirha wethu, wathi yinto engekhoyo.
Sasizokuyiqhawula kwaye sosule iteyiphu kodwa, ndathi ndisajikeleza istudiyo, ndeva unobhala eyicula kunye nokucoca ifestile. Ndisazi ukuba sinengoma: besingakhange siyibambe ngokufanelekileyo. UKevin ucebise ukuyenza kwakhona, kodwa ngeebhanki zamazwi. Ndacinga ukuba oko kuthetha ukuqesha ikwayala, kodwa uLol Creme, umdlali wethu webhodibhodi, uthe singayenza sisebenzisa ii-tape loops.
Indoda kule ngoma ivakala ngathi izama ukuziqinisekisa ukuba ayisathandani, kodwa ayisikhohlisi. Olu ngquzulwano luvela kwisihloko kwaye lwanceda ukuba le ngoma ibenomdla.
Kudliwanondlebe olwenziwe nguSongfacts noGraham Gouldman, wachaza wathi: 'Ndinezinto zokuvula kwaye ndikhule ukusuka apho. Mna noEric besisoloko siyiphepha ingoma yothando, kodwa bendihlala ndiqinisekile ukuba singenza eyona ibalaseleyo, kwaye kwakhona uEric weza nesihloko sale ngoma, kwaye yayiyeyona isihloko sigqibeleleyo somculo wothando. Kodwa ke, ngaba yingoma yokulwa uthando? Injalo Andithandani , okanye kunjalo ndisemathandweni ? '
Izwi elisebezayo elithi 'Yithi cwaka, amakhwenkwe amakhulu angakhali' livela kunobhala weStrawberry Studios (istudiyo esasisebenza nebhendi), uKathy Redfern. Bebekhangela isandi esithile xa uRedfern engena estudiyo exelela uEric Stewart ethe cwaka ukuba umnxeba. Bathi bakuva ilizwi lakhe, bayazi ukuba ilungile le ngoma.
Amalungu amane e-10cc ayekwindawo yomculo waseBritane okwethutyana xa babesakha. Vocalist / isiginci uGraham Gouldman wayelilungu le-Mockingbirds kwaye wayebhalele uJeff Beck, iiYardbirds, iiHollies kunye neeHermits zikaHerman. Umculi / isiginci uEric Stewart wayelilungu langaphambili likaWayne Fontana kunye nabakwaMindbenders, kwaye iimvumi / izixhobo ezimbaxa uLol Creme noKevin Godley bobabini babengabaculi be studio.
UStewart, uCreme noGodley baba ngamaqela ngo-1970 njengeqela leseshoni elaziwa ngokuba zii-Hotlegs; Baye bothuka nge-'Neanderthal Man 'eyenzeka xa babedibana nezixhobo. Ndikunye noGouldman ebhodini, batyikitya kwi-pop mogul Jonathan King yase-UK ilebheli ngo-1972 kwaye babhala ii-11 zase-UK eziphezulu ezi-10, kubandakanya ezinye ezimbini # 1:
'Ngo-1973 kunye' neDreadlock Holiday 'ngo-1978. UCreme no-Godley bayishiya ibhendi ngexesha' iDreadlock Holiday 'yarekhodwa ukugxila kwimveliso yevidiyo kunye nokuphuhlisa iGizmo, isixhobo sokuguqula isiginkci abasenzileyo. Babenenye i-US Top Ten hit ngo-1977, 'Izinto Esizenzayo Ngothando,' eyafikelela kwi # 5.
NgokukaKevin Godley, ekuqaleni bayirekhoda le ngoma njenge 'lounge-lizard, bossa-nova nto,' ngokucacileyo engazange isebenze. Bathe bakuyijonga kwakhona, beza nendlela entsha. 'Kungenxa yokuphelelwa lithemba ngokungazi ukuba masenzeni ukuba sizame onke amazwi ahlambayo,' utshilo u-Godley kudliwanondlebe lweNgoma. Ulibale izixhobo, ulibale isiginci, ulibale amagubu. Ngamazwi nje, njengeyaya yasezulwini, njengetsunami yamazwi. '
U-Godley uthi bachitha iintsuku becula amanqaku bekwimakrofoni, emva koko bajika baba ziiluphu zeteyiphu. Ezi maluphu zazilayishwe koomatshini beeteyipu abali-16 ezahlukeneyo zaza zaqengqeleka ngaxeshanye. Kwigumbi lolawulo, ilungu ngalinye lebhendi lalineefader ezine zokungenisa iluphu nganye ngaphakathi nangaphandle komxube kubhabho, abathi babambelela ngaphezulu kwingoma esisiseko abayakhileyo ngepiyano yombane, ikatala kunye nesixhobo sokudibanisa i-Moog esimiselwe ukulinganisa igubu . Utshilo u-Godley: 'Sisebenzise isikhokelo sokuqala sikaEric ekugqibeleni kuba sisebenzile, kwaye ukusukela ngelo xesha ukuya phambili, yonke into esiyidibanisileyo okanye esiyithathileyo okanye esitshintshileyo kuloo ndawo iyasebenza. Kwakungekho thuba lokukruna entloko, kungekho ngxabano, kungekho kungavisisani, kwakungekho ngxaki. Kwakungathi sikwiqamza lomlingo kwaye yonke into yawela endaweni yayo. Emva koko sayixuba, kwaye yayiyimizuzu emithandathu enesiqingatha ubude - into ephambeneyo- kwaye saqonda ukuba senze into ekhethekileyo. Sasingazi ukuba yayiyirekhodi okanye nantoni na, kodwa sazi ukuba ikhethekile. '
Ngo-1990, i-duo Will To Power yakhupha i-cover version eya kwi # 7 yase-US. Kwiminyaka emibini ngaphambili, Ngaba Amandla Aza kubetha # 1 e-US nge-medley yeengoma ezimbini zokugubungela: UPeter Frampton ' Mntwana, ndiyayithanda indlela yakho 'kunye' neNtaka yasimahla 'kaLynyrd Skynyrd.
Ezinye izimbozo ezithandwayo zibandakanya u-1976 u-Richie Havens owenza # 102 e-US, kunye no-1993 ngu-The Pretenders abhalelwe i-movie Isindululo esingafanelekanga -Le yenziwe nguTrevor Horn.
Iimuvi ezisebenzise le ngoma zibandakanya:
Ukuzibulala kweVirgin (1999)
UDeuce Bigalow: Indoda eyiGigolo (1999)
UBridget Jones: Umda weSizathu (2004)
Akayiyo loo nto kuwe (2009)
Phakathi koluhlu lwee-TV zokuyisebenzisa:
Inkunzi ('Uyenza njani into yokuTsala i-Bullet') -2017
Iimpuma - 2013
UVeronica Mars ('Molo, ukungathembeki' - 2006)
Phakathi ('Ukuba Ubambe' - 2008)
Uthando olukhulu ('Umdlalo wokuthandana' - 2007)
IOfisi ('Umgwebo' - 2001)
Oko kubonisa ii-70s ('Ubusuku boPhuculo' - 1999)
Le ngoma ivula imovie ka-2014 Abagcini beGalaxy , apho umlinganiswa kaChris Pratt emamele khona kwi-Walkman. Ingoma le yinxalenye yemixepape umama wakhe aswelekileyo amnike yona ebizwa ngokuba yiAwesome Mix Vol. 1, edlala indima enkulu kwifilimu kwaye ikwenze nengoma yesandi, ivuselela iihits ezininzi kwii-70s. 'Andikho Luthando' kunye nezinye izinto ezikhethiweyo ('Baleka (Ingoma yePiña Colada)' kunye ' Ubambeke kwimvakalelo 'phakathi kwabo) kukhetho olungahambelaniyo nomdlalo bhanyabhanya omkhulu, kodwa zingqineke zisebenza kakhulu, njengoko isandi esiye saya # 1 eMelika.
UMlawuli uBruce Gowers wenze le vidiyo kule ngoma ebonisa iqela eliyenzayo studio. Kwiminyaka embalwa kamva, u-Godley kunye noCreme benza iividiyo ezininzi ezithandwayo zokuthandwa ngamapolisa, uFrankie uya eHollywood naseGeorge Harrison. Ngo-2019, u-Godley wadubula a Ividiyo entsha ethi 'Andithandani' eyayisetyenziswa njengomboniso wekonsathi kuhlobo lukaGraham Gouldman lokutyelela lwe-10cc.
nini thina ziintshatsheli zaphuma
amazwi aza kuza kundisusa
Ibhendi ekubalekeni amazwi anentsingiselo
Ndiyakwazi ukubona ngokujonga emehlweni akho
nguwe kuphela obalaseleyo endakha ndanabo
Mr. inkulu ukuba nawe lyrics
ndingumvukeli okhatywa nje ngoku